Okufanele ukwenze uma ngabe iselula yami yebiwe, kungaba i-iPhone noma i-Android | Izindaba zamagajethi
UJordi Gimenez | | Izifundiswa
Okufanele ukwenze uma umakhalekhukhwini wami untshontshiwe? Akekho umuntu othanda ukuzithola ekulesi simo futhi kusobala ukuthi noma yini esiyenzayo ekuqaleni ingathuthukisa amathuba okuthola noma okubuyisa idivayisi eyebiwe. Noma kunjalo besivele sixwayise ukuthi lo akuwona umsebenzi olula futhi ngeshwa ezimweni eziningi kunzima ukuzithola, akufanele siyeke ukuzama.
Ngakho-ke ake singene esimweni. Cabanga ukuthi sisanda kuthenga noma sisanda kunikwa i-iPhone XS entsha sha, i-iPhone XR, i-Galaxy S9, i-Galaxy Note, i-Google Pixel noma iyiphi enye idivayisi yeselula ephezulu ngokweba basintshontshela. Yebo, kulezi zikhathi kufanele sizame ukuhlala sizolile futhi silandele izinyathelo esizikhombisile ngemuva kokugxuma.
Njengamanje, ukwebiwa kwamadivayisi eselula kwehle kakhulu ngenxa yezinyathelo zokuphepha ezithathwa ngabakhiqizi ukuvimbela ukuthi zingasetshenziswa ngaphandle kwephasiwedi yomnikazi osemthethweni, ngakho ezimweni eziningi iba yi-paperweight enhle. Kuyiqiniso futhi ukuthi izingxenye ezinalawa madivayisi (isikrini, i-chassis, izinkinobho, izinzwa, njll.) Zingasetshenziswa noma zidayiswe kabusha kwamanye amadivayisi futhi "ibhizinisi lokweba omakhalekhukhwini" liyaqhubeka nokusebenza nanamuhla ngenxa yalesi sizathu, noma ngiyethemba ukuthi akekho umuntu othenga lawa madivayisi ngezingxenye esingeke siqambe amanga ngakho futhi kuyinto eqhubeka ukwenzeka. Kunoma ikuphi, kungumgoqo owodwa kulabo abacabanga ukweba i-smartphone noma ithebhulethi.
1 Yazisa iziphathimandla ngokweba ngokushesha okukhulu
2 Okufanele ukwenze uma i-iPhone yakho yebiwe
3 Okufanele ukwenze uma i-Android yakho yebiwe
Yazisa iziphathimandla ngokweba ngokushesha okukhulu
Ngaphambi kokwenza noma yini engasile, kubalulekile ukuthi ubike ukwebiwa kocingo ngoba uma lizovela futhi endaweni ethile futhi iziphathimandla zikuthole nombiko usezandleni zakho, uzoba nezinkinga ezimbalwa uma sekuziwa ekubuyiseleni kuwe. Futhi akuwona wonke umuntu ogcina ibhokisi lamadivayisi futhi yize kuyiqiniso nge-invoyisi evela ku-opharetha wakho ungazi ngempela ukuthi ngabe le divayisi ingeyakho noma cha, cNjengoba isikhalazo sisesandleni senza inqubo ibe lula ngoba incazelo yedivayisi eyebiwe ivame ukucelwa ngaphezu komkhiqizo, imodeli, njll.
Ngakho-ke into yokuqala okufanele siyenze ukuya esiteshini samaphoyisa futhi sibike ukwebiwa kwe-smartphone ukuze futhi opharetha wethu ayivimbe ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi singashayela noma siye ku-opharetha ukuvimba inombolo yethu yocingo nokuthi ayikwazi ukushaya izingcingo bese siqhubeka nokuzama ukuthola i-terminal.
Okufanele ukwenze uma i-iPhone yakho yebiwe
Kulokhu, sizocabanga ukuthi idivayisi esanda kwebiwa kithi yi-iPhone yethu entsha sha. Yebo, intukuthelo ibalulekile ngakho-ke kufanele siphefumule imizuzwana embalwa ngaphambi kokwenza noma isiphi isinqumo esingalungile. Ezimweni eziningi bakutshela ukuthi uvimbe ngokuphelele idivayisi bese ushayela u-opharetha wakho ukuthi avimbe idivayisi esebenzisa i-IMEI, kodwa Ngaphambi kwalokhu singasebenzisa ithuluzi elikhulu le-Apple 'Thola i-iPhone yami'.
Esikhathini esingengakanani esidlule sishicilele enye i-athikili ende kuma-Blusens ekhombisa izinketho ze- "Thola i-iPhone yami" nokuthi ungayisebenzisa kanjani. Namuhla ngeke sicacise ngakho-ke iseluleko ukuthi hamba ngqo ngale ndatshana ukubona inani lezinketho esinikezwa yile nsizakalo ye-Apple. Kunoma ikuphi, into yokuqala ukwazi izinketho esinazo futhi eyokuqala ukusebenzisa imodi elahlekile ngokuqala iseshini icloud.com/find:
Sivula Thola i-iPhone yami bese sikhetha idivaysi ukubona ukuthi ikuphi kumephu. Uma ngabe idivayisi iseduze, ungayenza idlale umsindo ukuze wena noma umuntu osondelene naye ungayithola ngokushesha.
Ukwenza kusebenze imodi elahlekile yisinyathelo esilandelayo. Ngemodi elahlekile, singakukhiya ngokukude idivayisi ngekhodi (qaphela ukuthi le khodi iyadingeka ukwenza i-iPhone isebenze futhi uma siyithola), khombisa umyalezo owenziwe waba ngowakho onenombolo yakho yefoni kusikrini sokukhiya sedivayisi esilahlekile bese uthola idivayisi.
Uma ungeze amakhadi wesikweletu, edebhithi, noma akhokhelwa kusengaphambili ku-Apple Pay, amandla okwenza lokho ukukhokha nge-Apple Pay usebenzisa le divayisi kumisiwe okwesikhashana lapho ufaka idivayisi yakho kumodi elahlekile.
Sibika ukwebiwa kwale divayisi emaphoyiseni uma besingakaze sikwenze phambilini. Amaphoyisa angafuna inombolo yocingo yedivayisi.
Ukusula okuqukethwe kwedivayisi kungaba esinye isinyathelo esibalulekile kodwa qaphela ukuthi ungajahi. Ukuvimbela umuntu ukuthi afinyelele idatha kwidivayisi yakho elahlekile, ungayisula ukude, kepha ngokusula okuqukethwe kwedivayisi, yonke imininingwane yakho (kufaka phakathi amakhadi wesikweletu, edebhithi, noma wekhadi we-Apple Pay) iyasuswa futhi ngeke ukwazi ukuyithola usebenzisa i-Find My iPhone ngakho-ke ngeke ukwazi ukukuthola.
Uma ususa idivayisi ku-akhawunti yakho ngemuva kokususa okuqukethwe kwayo, i-Activation Lock izokhutshazwa. Lokhu kuvumela abanye abantu ukuthi basebenzise futhi basebenzise idivayisi yakho.
Yazisa u-opharetha wakho weselula ukuthi idivayisi yakho ilahlekile noma yebiwe ukuze bakwazi ukuvula i-akhawunti yakho ukuvimbela izingcingo, imibhalo ukuthi ingathunyelwa kanye nedatha ukuthi isetshenziswe. Idivayisi ingambozwa ngohlelo lomhlinzeki wakho weselula.
Lapho sesizenzile lezi zinyathelo, singalinda kuphela ukuba nesifo sohlangothi senhlanhla bese sithola i-iPhone yethu. Lezi zinyathelo zingenziwa ngawo wonke amamodeli we-iPhone futhi nangama-Macs anenketho yendawo. Ngokusobala lapho amadivayisi evaliwe ayikho inketho yokuwathola, ngakho-ke indlela elandelayo okufanele isetshenziswe ekuvikelekeni kwamadivayisi we-Apple nakuzo zonke izinkampani ukuthi ikhodi iyacelwa ukuthi ikwazi ukucisha i-terminal njengoba yenza ukuyivulaSekukonke, sicishe singalokothi siyicishe idivayisi ngakho-ke ngeke kube yinkinga ukuyisebenzisa.
Okufanele ukwenze uma i-Android yakho yebiwe
Izinyathelo empeleni ziyafana futhi lawa madivayisi nawo anenketho efanayo neye-Apple. Le ndlela isebenza ngohlelo lokusebenza olubizwa nge- "Thola idivayisi yami" futhi ingalandwa esitolo se-Google Play. Lolu hlelo lokusebenza icushiwe kusukela ukucushwa kokuqala uqobo futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngakolunye uhlangothi, kukhona nezinye izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ku-Google Play kepha azifani ncamashi. Sishiya isikhulu khona lapha:
Ngokusobala futhi njengamadivayisi we-Apple, kukhona uchungechunge lwezimo ezizokwazi ukuthola ukuphela futhi ezinye izinhlobo ze-Android kumamodeli amadala kungenzeka zingabi nezinketho zokusebenzisa le ndawo:
I-smartphone kufanele ivulwe
Yiba neseshini ku-akhawunti ye-Google
Xhuma kwinethiwekhi ye-Wi-Fi noma yedatha yeselula
Bonakala ku-Google Play futhi wenze indawo isebenze
Thola ukuthi idivayisi yami isebenze
Lapho sesikubonile okufuneka kuqala, kufanele sithathe ezinye izinyathelo ukuze sikwazi ukuzama ukuthola idivaysi uma ngabe yebiwe noma ngabe ilahlekile. Izinyathelo zangaphambilini zimi kanje:
Vula uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo zedivayisi yakho
Thinta Indawo nokuphepha. (Uma "Indawo nokuphepha" kungaveli, thepha i-Google> Ezokuphepha)
Thepha ukuthola idivayisi yami
Nika amandla izinketho Thola le divayisi kude futhi Vumela ukusula nokukhiya okukude
Manje sinomshini olungele ukuwuthola. Uma ngasizathu simbe lezi zinketho zikhutshaziwe ngesikhathi sokweba, ngeke sibe nenketho yokuthola okokusebenza, ngakho-ke Kubalulekile ukuthi lokhu kusebenze kusukela ekuqaleni lapho sethula idivayisi yethu ye-Android. Manje singaqhubeka nenqubo yokuzama ukuyibuyisa kusuka kuhlelo lokusebenza esesikhulume ngalo ngenhla futhi singaya ku-opharetha ukuvimba idivayisi sisebenzisa i-IMEI. Lokhu kungenziwa futhi ngemuva kwesikhashana futhi uma sibona ukuthi akunakwenzeka ukubuyisa i-terminal ngoba uma i-IMEI isivinjiwe, lapho-ke kunzima ukuvuselela imishini ukuze isebenze futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Okufanele ukwenze uma ngabe umakhalekhukhwini wami untshontshiwe
Izaphulelo kumikhiqizo yeKoogeek e-Amazon